ESI NYEFEE KỌNTAKTỊ SITE NA GAM AKPORO NA IPHONE - IOS NA MACOS - 2019
Esi nyefee kọntaktị site na gam akporo na iPhone
Bụ Apple ekwentị zụrụ na ọ dị mkpa iji nyefee kọntaktị site na gam akporo na iphone? - mee ka ọ dị mfe ma maka nke a, e nwere ọtụtụ ụzọ m ga-esi kọwaa ya n'akwụkwọ ntuziaka a. Ma, n'ụzọ, maka nke a, ị gaghị eji ihe omume atọ ọ bụla (ọ bụ ezie na ha zuru ezu), n'ihi na ihe niile ị nwere ike ibu. (Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịnyefe kọntaktsị na nke ọzọ: Ibufe kọntaktị site na iPhone ruo gam akporo)
Ịnyefe kọntaktị gam akporo ekwentị nwere ike ma ma ọ bụrụ na ejikọta kọntaktsị na Google, ma na-ejighi Ịntanetị, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo: site na ekwentị na ekwentị (ọ bụ n'ihi na anyị kwesịrị iji kọmpụta dị n'etiti). I nwekwara ike ibubata kọntaktị site na kaadị SIM gaa na iPhone, m ga-edekwa banyere nke ahụ.
Gaa na ngwa iOS iji nyefee data site na gam akporo na iPhone
Na ọkara nke abụọ nke afọ 2015, Apple wepụtara Move na Ngwa iOS maka gam akporo smartphones na mbadamba, e mere iji gaa iPhone ma ọ bụ iPad. Na ngwa a, mgbe ịzụtara ngwaọrụ site na Apple, ị nwere ike ịfefe ihe niile data gị, gụnyere kọntaktị, ya.
Otú ọ dị, nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na ị ga-ebufe kọntaktị na iPhone mgbe niile aka, otu n'ime ụzọ ndị a kọwara n'okpuru. Eziokwu bụ na ngwa-enye gị ohere idetu data naanị ọhụrụ iPhone ma ọ bụ iPad, i.e. mgbe arụ ọrụ ya, ma ọ bụrụ na emeelarị ọrụ gị, mgbe ahụ, iji usoro a ị ga-emerịrị ya na njedebe nke data niile (ya mere, echere m na njirimara dị na Market Market dị elu karịa ihe abụọ).
Nkọwa maka otu esi ebufe kọntaktị, kalenda, foto na ozi ndị ọzọ site na gam akporo na iPhone na iPad n'ime ngwa a, ị nwere ike ịgụ na ndu ndu Apple: //support.apple.com/ru-ru/HT201196
Tinye kọntaktị Google na iPhone
Ụzọ mbụ maka ndị nwere kọntaktị Android ka ha na Google jikọtara - na nke a, ihe niile anyị kwesịrị ịnyefe ha bụ icheta nbanye na paswọọdụ nke akaụntụ gị, nke ị ga-achọ itinye na ntọala iPhone.
Iji nyefee kọntaktị, gaa na ntọala iPhone, họrọ "Mail, adreesị, kalenda", wee - "Tinye akaụntụ".
Omume ndị ọzọ nwere ike ịdị iche (gụọ nkọwa ma họrọ ihe kacha adabara gị):
Ị nwere ike itinye akaụntụ Google gị naanị site na ịhọrọ ihe kwesịrị ekwesị. Mgbe ị gbakwụnye, ị nwere ike ịhọrọ ihe kpọmkwem iji mekọrịta: Mail, Ndi ana-akpọ, Kalenda, Ihe edeturu. Site na ndabara, a jikọtara usoro a dum.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnyefe kọntaktị naanị, wee pịa "Onye ọzọ", wee họrọ "Akaụntụ CardDAV" ma jupụta na paragraf ndị a: server - google.com, nbanye na paswọọdụ, na mpaghara "Nkọwapụta" ị nwere ike ide ihe na uche gị , dịka ọmụmaatụ, "Kọntaktị Nyocha". Chekwaa ihe ndekọ ahụ ma kọntaktị gị.
Ntị: ọ bụrụ na ị nwere nkwenye nzuzo abụọ na akaụntụ Google gị (SMS ga-abịarute mgbe ị abanye na kọmpụta ọhụrụ), ịkwesịrị ịmepụta paswọọdụ ngwa ma jiri paswọọdụ a mgbe ị na-abanye tupu ịmee ihe akọwapụtara (na nke mbụ na nke abụọ). (Banyere ihe paswọọdụ ngwa ngwa bụ na otu esi eme ya: //support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en)
Otu esi edepụta kọntaktị site na ekwentị Android na iPhone n'enweghị mmekọrịta
Ọ bụrụ na ịga na ngwa "Kọntaktị" na gam akporo, pịa bọtịnụ menu, họrọ "Bubata / Bubata" wee "Mbupụ na nchekwa", mgbe ahụ ekwentị gị ga-azọpụta vCard na nchịkọta .vcf, nke nwere niile kọntaktị gị Android na n'ụzọ zuru ezu na-aghọta iPhone na Apple software.
Ma na faịlụ a i nwere ike ime otu n'ime ụzọ ndị a:
Zipụ faịlụ kọntaktị site na email dị ka mgbakwunye na gam akporo na adres iCloud gị, nke ị debara aha mgbe i megharịrị iPhone ahụ. N'ịbụ onye natara akwụkwọ ozi ahụ na akwụkwọ ozi Mail na iPhone, ị nwere ike ibubata kọntaktị ozugbo site na ịpị faịlụ njikọ.
Zipu ozugbo site na ekwentị gam akporo site na Bluetooth gaa na iPhone gị.
Detuo faịlụ ahụ na komputa gị, wee dọrọ ya na iTunes emeghe (mekọrịtara na iPhone gị). Hụkwa: Otu esi ebufe kọntaktị Android na kọmputa (enwere ụzọ ndị ọzọ iji nweta faịlụ na kọntaktsị, gụnyere online).
Ọ bụrụ na ị nwere kọmputa Mac OS X, ị nwekwara ike ịdọrọ faịlụ ahụ na kọntaktị na ngwa Kọntaktị, ma, ọ bụrụ na i mekọrịta mmekọrịta iCloud, ha ga-apụta na iPhone.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmekọrịta na iCloud nyeere, ị nwere ike, na kọmputa ọ bụla ma ọ bụ ozugbo site na gam akporo, gaa na iCloud.com na ihe nchọgharị ahụ, họrọ "Ndi ana-akpo" n'ebe ahụ, wee pịa bọtịnụ Ntọala (aka ekpe) iji họrọ "Bubata vCard "ma dee ụzọ na faịlụ .vcf.
Echere m na usoro ndị a agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na kọntaktị na .vcf bụ ihe zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọ bụla iji mepụta ụdị data a.
Esi nyefee kọntaktsị kaadị SIM
Amaghị m ma ọ bara uru ịlụ di ma ọ bụ nwunye na-ebutefe kọntaktị site na kaadị SIM ka ihe dị iche, ma ajụjụ banyere nke a na-ebili.
Ya mere, iji nyefee kọntaktị site na kaadị SIM gaa na iPhone, ị ga-aga "Ntọala" - "Mail, adreesị, kalenda" na n'okpuru mpaghara "Kọntaktị" na pịa bọtịnụ "Bubata SIM". Na ihe nke sekọnd, a ga-echekwa kọntaktị nke kaadị SIM na ekwentị gị.
E nwekwara ọtụtụ mmemme maka Windows na Mac na-enye gị ohere ịnyefe kọntaktị na ozi ndị ọzọ n'etiti gam akporo na iPhone, Otú ọ dị, n'echiche nke m, dịka m dere ná mmalite, ha adịghị mkpa, n'ihi na enwere ike ime ihe niile na aka. Ka o sina dị, m ga-enye ụfọdụ n'ime ihe omume ndị a: niile na mberede, ị nwere echiche dịgasị iche iche banyere iji ya mee ihe:
Wondershare Mobile Nyefee
N'ezie, software a abụghị ihe dị ukwuu iji depụta kọntaktị n'etiti ekwentị na nhazi dị iche iche, mana maka ịmekọrịta faịlụ mgbasa ozi, foto na data ndị ọzọ, mana maka kọntaktị dị nnọọ mma.